အထူးကဏ္ဍ | Danya Wadi
Polotical Party in Myanmar: နိုင်ငံရေးပါတီများ
By danyawadi July 8, 2018 Leaveacomment
ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၈ M-Media – မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ရှည်ချေးငွေပေး ရာမှာ မိသားစုလုပ်ငန်းကို မျက်နှာ သာပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင် ရှင်နာဝပ်ထရာကို ထိုင်းတရားရုံးချုပ်က ဒီကနေ့မှာ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ သက်ဆင်ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေထိုင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ် ၂၀၀၃ ခုနှစ်က သူ့ရဲ့ဇနီးဟာ ဘန်ကောက်မြို့က အစိုးရပိုင် မြေကွက်တစ်ခုကို ၀ယ်ရာမှာ မသမာမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်အတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချမှတ်ခြင်း ကိုလည်း ခံထားရပါတယ်။ အခု ထောင်ဒဏ် ထပ်ချခံရတဲ့အမှုဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ သွင်းကုန်-ထုတ်ကုန်ဘဏ် Exim Bank […]
ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ လမ်း နာမည် အဟောင်းတွေ ​လေ့လာရန်​
By danyawadi July 16, 2017 Leaveacomment
1. Barr Strrrt – မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း 2. Boundary Road – ဓမ္မစေတီလမ်း 3. Brooklyn Street – ဘိုကလေးဈေးလမ်း 4. Churchill Street – အိမ်တော်ရာလမ်း 5. Campbell Road – ငါးထပ်ကြီးဘုရားလမ်း 6. Canal Street – ကျုံးကြီးလမ်း(လမ်းမတော်) 7. Chancellor Road – အဓိပတိလမ်း(ကမာရွတ်) 8. Chiangchaung Avenue – ကမ္ဘောဇလမ်း 9. Commissioner’s Road – ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း( အနောက်) 10. Creek Street – ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း 11. Dalhousie Road – […]
သမ္မတအိမ်တော်မှ သမိုင်းဝင် နှစ်နာရီကျော်
By danyawadi November 1, 2014 Leaveacomment
အောင်သူရ Sat, 2014-11-01 ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မြဝတီ) သမ္မတအိမ်တော်တွင် ပြု လုပ်သည့် သမိုင်းဝင်ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပထမဆုံးရောက်လာသူမှာ တပ်မ တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ် ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးပွဲကို နံနက် ၉ နာရီ ခွဲတွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားရာ ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာပင် ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်မည့် ငုရွှေဝါခန်းမသို့ ၎င်းတို့ နှစ်ဦးရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၅ မိနစ်ခန့်အကြာ တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒုတိယသမ္မတနှစ်ဦးတို့ အတူတကွ လမ်း လျှောက်ရောက်လာသည်။ သမ္မတနှင့် ဒုသမ္မတ နှစ်ဦး အား ကြိုတင်ရောက်ရှိနေသော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်နှင့် ဒုတိယတပ်မတော်ကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဆင်ဝင် အောက်နေရာမှ […]
ဗီယက်နန်မှဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် (or) အမေ့စာတစ်စောင်(ဖြစ်ရပ်မှန်)
By danyawadi October 23, 2014 Leaveacomment
အမေရိကန်- ဗီယက်နန် စစ်ပွဲပြီးတဲ့အချိန် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာ ဆင်းရဲတွင်းထဲ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ စစ်ထဲမှာ ကျဆုံးသွားပြီး သားအမိ နှစ်ယောက်သာ ကျန်တော့သတဲ့။ ရုပ်ရည် အားဖြင့်ကော၊ စိတ်ထားလှ မှုကြောင့် မုဆိုးမ ဘဝသို့ ရောက်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ နောက် အိမ်ထောင် ပြုမယ်ဆို ဆက်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ကိုယ်တည်း ရုန်းကန်ပြီး သားလေး ကို ခေတ်ပညာနဲ့ မပြတ်ပဲ ထားပေးဖို့ပဲ သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ကို ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာလုပ်ပေမယ့် သားလေးက ပညာတော်တော့ ဝမ်းသာ ရှာပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်ဘဝရောက်တော့ စကော်လာရှစ်ရပြီး အမေရိကန်မှာ ကျောင်းတက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ အမေရိကန် NASA မှာပဲ အလုပ်ရပြီး အမေရိကန်မှာပဲ အသက်ရှင်လုပ်ကိုင်ပါတော့တယ်။ အမေကတော့ ဝမ်းသာမျက်ရည်နဲ့ တစ်ယောက်တည်း […]
သူ(“မုဟမ္မဒ်”)သည် တစ်ကိုယ်တည်းနှင့် “ဆီဇာ”လည်း ဖြစ်သကဲ့သို့၊ “သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး”ကဲ့သို့ လည်းဖြစ်ပါသည်။ – သာသနာပိုင်ဖြစ်လင့်ကစား ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကဲ့သို့ သာသနာပိုင် အဆောင်အယောင်နှင့် ကိန်းခန်း ကြီးကျယ်ခြင်းမှကင်းသည်။ – “ဆီဇာ”ဖြစ်လင့်ကစား “စစ်ဘုရင်ဆီဇာ”ကဲ့သို့ တပ်တောင်တာ ဗိုလ်ထုမရှိ၊ အခိုင်အမာ အမြဲတမ်း စစ်တပ်ကြီးလည်း မရှိ၊ သက်တော်စောင့် ကိုယ်ရံတော် တစ်ဦး တစ်ယောက်မျှပင်မရှိ၊ စံမြန်းရန် အဆောင် နန်းတော်တစ်ခုမျှမရှိ၊ အခွန်အတုပ် တစ်စုံတစ်ရာ စည်းကြပ်ခြင်းလည်းမရှိ။ – လူတိုင်း အမှန်အတိုင်းပြောနိုင်သည့် အချက်မှာ မှန်ကန်သောကောင်းကင်ကျ လမ်းညွှန်ဥပဒေအတိုင်း တိကျစွာအုပ်ချုပ်သွားသူမှာ “မုဟမ္မဒ်”ပင်ဖြစ်သည်။ – မည်သည့်ကိရိယာတန်ဆာပလာ လက်နက်ယန္တရား ပစ္စည်းမျှမပါ။ မည်သည့် ထောက်ပံ့မှုမျှ မပါရှိဘဲ အလုံးစုံ သော အချုပ် အခြာအာဏာကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့သူမှာ သူ … […]